Ngabe kukhona ongangisiza ukuthi ngithuthele umthumeli ezindaweni ezintsha ezengeziwe?
unyaka 1 7 edlule - unyaka 1 7 edlule #1046 by jinx
Ifayela lise-flightsim.com ebizwa ngokuthi bige_ai.zip.
Ngifuna ukuhambisa isithwathwa se-English Channel ezindaweni ze-4 emanzini aseGrisi futhi nginganikeza izixhumanisi - indawo eyodwa izosuswa eCyprus, enye i-3 emanzini aseGreek.
Noma yikuphi usizo kuzokwaziswa.
Ukuhlela kokugcina: Unyaka we-1 izinyanga ezingu-7 ezedlule jinx.
Umsebenzisi alandelayo (s) wathi Thank You: jdm601